Iyo nyowani vhezheni yeUbuntu 19.10 yakaburitswa Eoan Ermine | Kubva kuLinux
Mushure memavhiki akati wandei ekuvandudza, ivo vakomana veCanonical vaburitsa nhasi yakagadzikana vhezheni yeUbuntu 19.10 "Eoan Ermine", iyo yatowanikwa kune veruzhinji. Iyi vhezheni itsva yekuparadzira inosvika nenhau dzakasiyana siyana pakati payo izvo zvimiro zvitsva zvezvinhu zvakasiyana zveiyo system (desktop, kernel uye mapakeji) anomira.
Pamusoro pekuwedzera mamwe matsva uye zviyero zvekuyedza izvo zvinozoedzwa mune ino shanduko vhezheni kune inotevera LTS vhezheni yeUbuntu.
1 Nhau huru dzeUbuntu 19.10 Eoan Ermine
1.2 ZFS yekuyedza kuyedza
2 Dhawunirodha uye utore Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
Nhau huru dzeUbuntu 19.10 Eoan Ermine
Mune iyi vhezheni itsva yeUbuntu 19.10 yezvinhu zvitsva zvinomira pachenan, tinogona kuona kuti nharaunda yedesktop Gnome yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.34 nerutsigiro rwekupatsanura mafoni ekushandisa mune yekutarisa maitiro, yakavandudzwa isina waya yekubatanidza inogadziridza, desktop nyowani uye basa rekusarudza kumashure kwepaneru kuti uwedzere kupindura kwechimiro uye kudzikisa mutoro paCPU.
Panzvimbo yetimu yambotaurwa nezvayo nerima misoro, yakajeka tema inoshandiswa nekukanganisa, padhuze neyakajairika Gnome chitarisiko. Sarudzo, theme yerima yakasarudzika, mune iro rima kumashure rinoshandiswa mukati memahwindo.
Uyewo akawedzera kugona kweanobvisa madhiraivha e USB akabatana akananga kubva panhare. Zvezvifambiso zvakabatana, iyo pani ikozvino inoratidza iwo macomputer anoenderana nawo aunogona kuvhura zvirimo mune maneja maneja kana kudzikisa iyo drive kuti ubvise zvakachengeteka chishandiso.
Zvakare zvakare mune iyi vhezheni itsva yakagoneswa nekutadza, iko kukwanisa kuronga kuwana kune multimedia dhata uchishandisa protocol. Semuenzaniso, mushandisi anogona kugovera muunganidzwa wemavhidhiyo ekuona pane SmartTV.
Munharaunda yeWayland-yakavakirwa, zvinokwanisika kumhanyisa X11 kunyorera nemidzi rombo pasi pekutonga kweXwayland.
Kune moyo weiyo system, muUbuntu 19.10 iyo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.3. Kumanikidza iyo Linux kernel uye yekutanga boot mufananidzo initramf, iyo LZ4 algorithm inoshandiswa, iyo inoderedza nguva yebhutsu nekuda kwekukurumidza kudzora kwedata.
Zvakare, Toolkit yakagadziridzwa ku glibc 2.30, GCC 9.2, OpenJDK 11, rustc 1.37, Python 3.7.5, ruby ​​2.5.5, php 7.3.8, perl 5.28.1, enda ku1.12.10. Mapakeji akawedzerwa neMySQL 8.0.
LibreOffice hofisi suite yakagadziridzwa kuita 6.3, PulseAudio Sound Server yakagadziridzwa kuita vhezheni 13.0, QEMU 4.0 yakagadziridzwa, libvirt 5.6, dpdk 18.11.2, Vhura vSwitch 2.12, gore-init 19.2, uyezve Wakawedzera rutsigiro rweWPA3 isina waya yekuchengetedza tekinoroji inosimbiswa.
ZFS yekuyedza kuyedza
Kana chiri chikamu chekuyedza, Ubuntu 19.10 inoratidza kuwedzera kwekuyedza kwekuyedza kuisa iyo midzi yekuparadzanisa neZFS. Wakawedzera rutsigiro rwekusika uye kupatsanura neZFS mune inoisa.
Iyo itsva zsys daemon iri kugadzirirwa kubata ZFS, iyo inokutendera iwe kumhanyisa akawanda akafanana masisitimu neZFS pane imwe komputa, inogadzira snapshot yekugadzira, uye inodzora kupatsanurwa kweesystem data uye data iro rinoshandurwa panguva yemushandisi chikamu.
Pfungwa huru ndeyekuti muzvidimbu zvakasiyana zvinogona kuve neakasiyana mamiriro eiyo system uye chinja pakati pavo. Semuenzaniso, kana paine matambudziko mushure mekuisa zvigadziriso, zvinokwanisika kudzokera kune yapfuura yakagadzikana mamiriro nekusarudza yapfuura snapshot. Zvinyorwa zvinogona zvakare kushandiswa otomatiki kusimudzira data remushandisi.
Dhawunirodha uye utore Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Iyo nyowani vhezheni yeUbuntu 19.10 Eoan Ermine yakatoburitswa kare
Mhoro, mu ubuntu 19.10 rairo sudo aptitude yekuisa seahorse-plugins haina kushanda, iyo terminal inondiudza kuti pasuru yacho haiwanikwi, kana kuti yatove yechinyakare (iyo yandinofunga), kana kuti iyi package iri mune imwe sosi. Izvo zvinondipa zvimwe zviviri zvasarudzo asi pasina kana imwe yandakakwanisa kuisa kunyorera uye kuseta mune nautilus.
Chii chingaitwe pakadai ??
Pindura kuna honio